Tartankii kubada cagta ee is-dhex galka dhalinta da’da yar ee koonfurta iyo waqooyiga Gaalkacyo oo soo gaaray kulankiisii kama danbaystaa (Final). – Radio Daljir
Oktoobar 5, 2012 11:37 b 0
Gaalkacyo, Oct 05- Waxaa kulankiisii ugu danbeeyay ee Finalka soo gaaray tartankii kubada cagta ee is-dhex galka dhalinta da’da yar ee koonfurta iyo waqooyiga magaalada Gaalkacyo kaasoo soo biloowday 13kii bishii hore ee September ayna ka soo qayb galeen siddeed kooxood oo ka kala socday laba dhinac.
Tartankan ay isku arkayeen dhalinta da’doodu ay ka hoosayso 14 jir ayaa waxaa soo qaban-qaabiyay Ururka Puntland Sports Ilusted oo uu hormuud ka yahay Axmed Nuur Ciise oo xaruntoodu tahay gobolka Mineapolis taasoo ujeedkoodu uu yahay caawinta dhalinta si ay ugu bar-baaraan daganaashaha iyo ku dhaqankan hababka wanaagsan ayna u sameeyaan is-dhex gal wax weyn ka tara mustaqbalkooda.
Tartankan waxaa hawshiisa waday intii uu soo socday C/qani Khaliif Carabey oo ka mida bahda u oloolayso hormarinta dhalin-yarada gaar ahaan dhanka cayaaraha oo ku nool Gaalkacyo, waxaana sidoo kale gacan weyn ka gaysanayay labada maamul ee Gal-mudug iyo Puntland gaar ahaan qaybaha qaabilsan cayaaraha, waxaana furitaankii tartankan ka qayb galay labada gudoomiye ee labada dhinac C/hodan Dayax leef dhanka Puntland Ayaanle C/laahi C/dulle oo ka socday dhanka Gal-mudug, tallaabadaas oo ay soo dhaweeyeen dhalintu.
Ciyaarihii loogu soo baxay Finalka ee Sami-finalka waxaa wada ciyaaray kooxaha Faleembo iyo Topaz waxaana halkaasi ka soo gudubtay kooxda Topaz ka dib markii ay 2-1 guusha ay ku raacday, kulankii labaad oo isaguna xamaasad gaar watay ayaa dhex maray kooxaha Sohdo iyo Horseed Fc waxaana halkaasi lagu reebay kooxda Horseed ka gadaal markii loogu awood sheegtay 1-0, sidaasna ay kooxuhu ku kala baxeen.
Labada kooxood ee Topaz iyo Sohdo ayaa la sugayaa inay ciyaarta kama danbaystaa wada ciyaaraan maalinta Jimcahaa ee fooda nagu soo hayso iyadoo ay ka soo qayb gali doonaan labada maamul ee Sportska iyo wax-garadka inta xiisaysa ciyaaraha gaar ahaan kubada cagta iyo sidoo kale daneeyaasha arimaha bulshada.
Madaxa tartankan C/qani Khaliif Carabeey oo garoonka kubada cagta ee Cawaale Stadium saxaafada kula hadlay ayaa ka warbixiyay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray tartankan, isagoo muujiyay dadaalkiisa shaqo iyo qaababka uu isugu keenay dhalinta intaas le’eg dhabar adaygna uu u soo muujiyay caqabado badan oo ka horyimid.